Alarobia 9 Febroary 2022
Trano Fandraisam-Bahiny Miverena any amin'ny natiora, toerana ara-kolotsaina ao an-tanàna. Mamorona fomba voarindra. Mankafy milamina sy milamina tsara. Ny hotely dia hita ao amin'ny faritra mampientam-po amin'ny Baoding High-tech Development Zone. Ny mpamorona dia mamerina mamorona ny trano fandraisam-bahiny ao amin'ny tanàna amin'ny eritreritra eritreritra amin'ny alàlan'ny famelomana indray ny tontolo manodidina, ny maritrano, ny tontolo ary ny atiny hananganana toerana hôtely manan-tsaina sy voajanahary ary mahazo aina. Avelao ny mpandeha mpandraharaha hahatsapa ho miroborobo ao anaty mangina, mangalatra fialan-tsasatra mandritra ny andro iray.
Talata 8 Febroary 2022
Ny Biraon'ny Varotra Miaraka amin'ny haavon'ny rano ho fitaratra dia nidina ny sarin'ny haavon'ny trano; miaraka amin'ny sary sokitra sy ny fambolena ho toy ny singa, ny fahalianana rano dia miforona amin'ny alàlan'ny haingo; miaraka amin'ny fambolena mitsingevana sy fanovana loharano sy jiro ara-javakanto, mihetsika ny fahalianana ； Amin'ny rano ho fanahy, ny fitambaran'ny zavakanto sy ny fiasa dia alaina amin'ny alàlan'ny fiolahana toerana; ny dobo filomanosana midadasika, rehefa mafana ny masoandro, ny rano mandeha, madio sy mangarahara, mamirapiratra, mamakivaky ny rano mamirapiratra, dia afaka mahita ny toe-tsain ny andry tsirairay, dia toa manadio ny sain'olombelona amin'ny ankapobeny.
Alatsinainy 7 Febroary 2022
Alahady 6 Febroary 2022
Asabotsy 5 Febroary 2022
Zoma 4 Febroary 2022
Simplest Happiness Ny Sary Mihetsika Momba Ny Varotra Alahady 3 Jolay
Chirming Afisy Asabotsy 2 Jolay
Santander World Ny Sary Sokitra An-Tanàn-Dehibe Zoma 1 Jolay
Trano Fandraisam-Bahiny Ny Biraon'ny Varotra Ny Tranobe Karazana Piano Ny Trano Fivarotana Ny Trano Fonenana